၁၈ ရာစု ဘီစီ (ဘီစီ ၁၈၀၀) မှ ဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးမှာ မိုက်ဆီးနီးယန်လူမျိုး နှင့် မစ်နိုးယန်လူမျိုး သီဆိုသူများ၏ နှုတ်တက် ကဗျာလင်္ကာရွတ်ဆိုမှု ဓလေ့များမှ မူလအရင်းခံသဘောအားဖြင့် ပြန့်ပွားလာခဲ့ကာ အဆုံးသတ်၌ ထရိုဂျန်စစ်ပွဲနှင့် စစ်ကြီးအပြီးခေတ်က သူရဲကောင်းများနှင့် ပတ်သက်သော ဒဏ္ဍာရီများသည် ဟိုးမား၏ ကဗျာလင်္ကာရှည်များဖြစ်သော အစ်လိယဒ် နှင့် အော့ဒဆီ (ဂရိ - အိုဒိဆီယား)တို့၏ နှုတ်မှုရေးရာ လက်ဆင့်ကမ်းသည့် အလေ့အထတို့၏ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ ဟိုးမားခေတ်နီးပါးကာလက ကဗျာဆရာ ဟီးဆီးယဒ်၏ သီယိုဂန်နီ (ဂရိ - သီယိုဂေါနီးယား) နှင့် 'အလုပ်များနှင့် နေ့ရက်များ' စသည့် ကဗျာကြီးနှစ်ပုဒ်တွင်လည်း ကမ္ဘာဦးကာလအကြောင်းတရားများ၊ တန်ခိုးစွမ်းအားရှိသူ မင်းလုပ်အုပ်စိုးသူများ၊ လူသားခေတ်၊ လူတို့၏ ပူဆွေးသောကဗျာပါဒများ၏ မူလအကြောင်းခံများနှင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးများ၏ ဇာစ်မြစ်များ ပါဝင်သည်။ ဟိုးမားဓမ္မတေးသီချင်းများ၊ ကဗျာလင်္ကာပေါင်းစုမှ ကဗျာရှည်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများ၊ စကားပြောပုံစံရှိ ကဗျာများ၊ ဘီစီငါးရာစုခန့်က အလွမ်း အသောများ ရေးသောဇာတ်ဆရာများ လက်ရာများ၊ ဟဲလင်နစ်စတစ်ခေတ်က ပညာရှင်များနှင့် ကဗျာဆရာများရေးဖွဲ့သော လက်ရာများ၊ ရောမအင်ပါယာခေတ်က ပလူးတာ့ခ် နှင့် ပေါ်ဆန်းနိယာစ် ကဲ့သို့သော စာရေးဆရာများ၏ စာပေများ စသည်တို့တွင် ဒဏ္ဍာရီများကို မပျောက်မပျက်စေရန် ထိန်းသိမ်းထားရှိခဲ့ကြသည်။
အနောက်တိုင်း လူမှုအဖွဲ့အစည်း၏ စာပေ၊ အနုပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှုများအပေါ် ကြီးကြီးမားမား ဩဇာညောင်းခဲ့သည့်အပြင် အနောက်တိုင်း၏ (ယဉ်ကျေးမှု၊ သမိုင်း.. ) အမွေအနှစ် နှင့် ဘာသာစကားတို့၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်လျှက်ရှိသည်။ ခေတ်အဆက်ဆက်မှ ယနေ့ထိတိုင် ကဗျာဆရာများနှင့် ပန်းချီဆရာများသည် ဂရိဒဏ္ဍာရီမှ စေ့ဆော်မှုများ ရရှိခဲ့ကြကာ ဤအကြောင်းအရာထုထည်ကြီးတွင် ခေတ်သစ်သဘော အရေးပါအရာရောက်ခြင်းနှင့် ဆီလျော်လိုက်ဖက်မှုရှိခြင်းတို့ကိုလည်း ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။:43
ဂရိဒဏ္ဍာရီကို အခြေခံအားဖြင့် ဂရိစာပေနှင့် ဘီစီ ၉၀၀ ခန့်က ဂျီဩမေထရီခေတ် (အိုးများတွင် ဂျီဩမေထရီပုံစံများ ရေးဆွဲသောခေတ်) မှသည် ဘီစီ ၈၀၀ နောက်ပိုင်းကာလများထိ သက်တမ်းရှိသော အမြင်ပုံဖော် တင်ဆက်ခြင်း/ချယ်မှုန်းခြင်းများမှ သိရှိကြသည်။:200 အမှန်ဆိုရလျှင် စာပေနှင့် ရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုင်ရာရင်းမြစ်များ ပေါင်းစပ်သွားကြပြီး ရံဖန်ရံခါ၌ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် အထောက်အပံ့ပေးကြသော်လည်း ရံခါ၌ အပြန်အလှန် ဆန့်ကျင်သည့် အနေအထားမျိုးလည်း ရှိကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ များစွာသောဖြစ်ရပ်များတွင် အချက်လက်ဆိုင်ရာ ဤအစုအဝေးကြီး တည်ရှိမှုသည် ဂရိဒဏ္ဍာရီ၏ အခြေခံအခြင်းအရာများတွင် အချက်လက်ဆိုင်ရာနှင့် သမိုင်းဆိုင်ရာ အရင်းခံများ ခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေသည်ဟု ကောင်းစွာရည်ညွှန်းဖော်ပြလျှက်ရှိသည်။
ဂရိစာပေ အမျိုးအစားနီးပါးတိုင်းတွင် အရေးကြီးသော ကဏ္ဍတစ်ရပ်မှာ ဒဏ္ဍာရီလာ ဇာတ်လမ်းများဖြစ်၏။ သို့သော် ရှေးဟောင်းဂရိခေတ်မှ ရှင်သန်ကျန်ခဲ့သော တစ်ခုတည်းသော ယေဘုယျသဘော ဒဏ္ဍာရီဖော်ပြချက် လက်စွဲစာအုပ်သည် ဆူဒို-အပေါလိုဒိုးရပ်စ်၏ စာအုပ်များ ဖြစ်သည်။[မှတ်စု 1] ဤစာပေလက်ရာသည် ကဗျာဆရာများ၏ ရှေ့နောက်မညီ ကွဲလွဲနေသောဇာတ်လမ်းများကို စေ့စပ်ပြေလည်ရန် အထောက်အကူပြု၍ ရိုးရာ ဂရိဒဏ္ဍာရီနှင့် သူရဲကောင်းရာဇဝင်များ၏ ခမ်းနားကောင်းမွန်သည့် အကျဉ်းချုပ်ကို ဖော်ပြထားသည်။ :1 အေသင်မှ အပေါလိုဒိုးရပ်စ်သည် ဘီစီ ၁၈၀ ခန့်မှ ဘီစီ ၁၂၅ ဝန်းကျင်ခန့်အထိ နေထိုင်သွားကာ ဒဏ္ဍာရီ၊ ရာဇဝင်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ရေးသားခဲ့၏။ ၎င်း၏ အရေးအသားများသည် (ဒဏ္ဍာရီ)စာစုစာဝေး၏ အခြေခံဖြစ်နိုင်ချေရှိသော်လည်း ယင်းစာစုများ၌ အပေါလို သေဆုံးပြီးနောက် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အကြောင်းအရာများကိုလည်း ဖော်ပြထားသောကြောင့် ဆူဒို-အပေါလိုဒိုးရပ်စ် (Pseudo-Apollodorus; တိုက်ရိုက် : အပေါလိုဒိုးရပ်စ် အစစ်မဟုတ်၊ အတုသာဖြစ်သည်။) ဟူ၍ အမည်တွင်သည်။
ဂီးစတပ်ဗ် မိုးရို၏ လက်ရာဖြစ်သော ပရာမီးသီးယပ်စ် (၁၈၆၈)၊ ပရာမီးသီးယပ်စ် ဒဏ္ဍာရီကို ပထမဆုံး သက်သေပြုသူမှာ ဟီးဆီးယဒ်ဖြစ်၍ နောင်တွင် ပြဇာတ်တွဲ သုံးပုဒ်ကို ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ရေးဖွဲ့သူမှာ အီးစကီးလပ်စ်ဖြစ်ကာ ထိုသုံးပုဒ်မှာ ပရာမီးသီးယပ်စ်ကို ချည်နှောင်ခြင်း၊ ချည်နှောင်ခြင်းမှ လွတ်ကင်စေခြင်းနှင့် မီးဆောင်ကျဉ်လာသူ ပရာမီးသီးယပ်စ် တို့ဖြစ်၏။
စကားပြောစာသားပုံစံရှိ ကဗျာများရေးသော ဆရာတို့သည် ဒဏ္ဍာရီများမှ ၎င်းတို့၏ အကြောင်းအရာများကို များသောအားဖြင့် ယူငင်ရေးသားကြသော်လည်း ကဗျာပုံစံ ရေးသားတင်ပြဆက်ဆံပုံမှာ ဇာတ်လမ်းအသွားနည်းလာကာ ဝင်္ကဝုတ္တိခေါ် သွယ်ဝိုက်သည့်ပုံစံဖြင့်ရေးသားသောပုံစံ တဖြည်းဖြည်းခြင်း ဖြစ်သွားသည်။ ဂရိလူမျိုး ထိုသို့သောကဗျာရေးသောသူများ၌ ပင်ဒါ၊ ဘက်ခစ်လစ်ဒီးဇ်၊ ဆိုင်မွန်နစ်ဒီးဇ်တို့ပါဝင်၍ ကျေးလက်ဖွဲ့ ကဗျာဆရာများတွင် သီးယော့ခရစ်တပ်စ် နှင့် ဘိုင်းယွန် တို့ဖြစ်ကြကာ ၎င်းတို့သည် သီးသန့် ဒဏ္ဍာရီဆိုင်ရာ အဖြစ်အပျက်များကို ဆက်စပ်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။:xii ထို့အပြင် ဒဏ္ဍာရီသည် ဂန္ထဝင်အေသင်ဇာတ်များအတွက် အရေးကြီးဆုံးလည်း ဖြစ်ပေသည်။ အလွမ်းဖွဲ့ ပြဇာတ်ဆရာ အီးစကစ်လပ်စ်၊ ဆော့ဖာကလီးဇ်၊ ယူရစ်ပစ်ဒီးဇ် တို့သည် ထိရိုဂျန်စစ်ပွဲနှင့် သူရဲကောင်းခေတ်၏ ဒဏ္ဍာရီများမှ ၎င်းတို့၏ ဇာတ်လမ်းများကို ယူငင်ရေးသားကြသည်။ ကြီးကျယ်သော အလွမ်းအဆွေးဇာတ်လမ်းများမှာ နမူနာအားဖြင့် 'အဲဂါမန်းနန်နှင့် သူ၏ကလေးများ' ၊ 'အီးဒစ်ပါ့စ်' ၊ 'ဂျေးဆန်' ၊ 'မစ်ဒီးယာ' ဇာတ်လမ်းများဖြစ်ကာ ဖော်ပြပါ ပြဇာတ်ဆရာများသည် ဤအလွမ်းဇာတ်များတွင် ၎င်းတို့၏ ဂန္ထဝင်ပုံစံ(ရေးဖွဲ့မှု) ကို အသုံးချကြသည်။ အသောဖွဲ့ပြဇာတ်ဆရာ အာရစ်တောဖာနီးဇ်ကလည်း ၎င်း၏ ပြဇာတ်နှစ်ပုဒ် 'ငှက်များ' နှင့် 'ဖားများ' တွင် ဒဏ္ဍာရီကို အသုံးပြု ရေးဖွဲ့ခဲ့သည်။:8
ထိုခေတ်ကာလများမှ ဒဏ္ဍာရီကို ကိုးကား၍ ရေးဖွဲ့ကြသော စကားပြေ စာရေးဆရာများမှာ အာဖျူလိယပ်စ်၊ ပစ်ထရိုနီးယပ်စ်၊ လိုလီယာနပ်စ်၊ အမ်မာစာမြို့မှ ဟီးလိယဒေါရပ်စ် တို့ဖြစ်ကြသည်။ အခြားအရေးပါသော ကဗျာမဟုတ်သည့် ရင်းမြစ်များမှာ ရောမစာရေးဆရာ ကလောင်အမည်အားဖြင့် ဆူဒို-ဟစ်ဂျိုင်းနပ်စ်၏ Fabulae and Astronomica ၊ ဖီလော့စထရပ်တို့စ်မှ စာရေးဆရာနှစ်ဦး တို့၏ Imagines အမည်တွင်သည့် စာအုပ်တွဲများ၊ ကာလီစထရပ်စ်၏ Descriptions စာအုပ် တို့ဖြစ်ကြသည်။
ဂြီဩမေထရီ ပုံစံများကို ရှစ်ရာစုခန့်က အိုးများ၌ ရေးသားဆွဲခဲ့ကြကာ အကြောင်းအရာများမှာ ထရိုဂျန်စစ်ပွဲမှ ပြကွက်များနှင့် ဟဲရာကလီးဇ်၏ စွန့်စားခန်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ဤသို့ ဒဏ္ဍာရီများကို အမြင်ပိုင်းသရုပ်ဖော်ပြခြင်းသည် အကြောင်းတရားနှစ်ခုအတွက် အရေးကြီးသည်။ ပထမအကြောင်းမှာ များပြားသော ဂရိဒဏ္ဍာရီများကို စာပေဆိုင်ရာရင်းမြစ်များထက် မြေအိုးပေါ်သရုပ်ဖော်ထားရှိခြင်းသည် ပို၍စောသည်ဟု သက်သေခံနိုင်သည်။ ဥပမာ : ဟဲရာခလီးဇ် (ဟာကျူလီ) ၏ ခက်ခဲကြမ်းတမ်း စွန့်စားခန်း (၁၂) မျိုးတွင် ဆားဘရပ်စ် စွန့်စားခန်းတစ်ခုသာ ခေတ်ပြိုင်စာပေများတွင် တွေ့ရသည်။ ဒုတိယအနေဖြင့် ရံခါ၌ အမြင်ပိုင်းသရုပ်ဖော် ရင်းမြစ်များသည် လက်ရှိရှိနေသော စာပေရင်းမြစ်များတွင် မတွေ့ရသော ဒဏ္ဍာရီ (သို့) ဒဏ္ဍာရီပြကွက်များကို သရုပ်ဖော်ယူဆောင်ပေးသည်။ အချို့သောအနေအထားများတွင် ဂြီဩမေထရီပန်းချီဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့သော ဒဏ္ဍာရီကို ပထမဆုံးလူများသိစေရန် တင်ဆက်ဖော်ပြမှုသည် ရှေးကျသော ကဗျာလင်္ကာများ၌ ဖော်ပြမှုန်းချယ်တင်ဆက်မှုထက် ရာစုနှစ်အချို့ စောလေသည်။ ရှေးဟောင်းခေတ် (ဘီစီ ၇၅၀-၅၀၀ ဝန်းကျင်) ၊ ဂန္ထဝင်ခေတ် (ဘီစီ ၄၈၀-၃၂၃ ဝန်းကျင်) ၊ ဟဲလင်နစ်စတစ်ခေတ် (ဘီစီ ၃၂၃ -၁၄၆ ဝန်းကျင်) ကာလများတွင် ဟိုးမားနှင့် အခြားများစွာသော ဒဏ္ဍာရီလာ ပြကွက် အခန်းများ ပေါ်ပေါက်လာကြ၍ ထိုစဉ်က ရှိနှင့်ပြီးသော စာပေဆိုင်ရာ သက်သေသာဓကများကို ထောက်ပံ့ဖြည့်စွက်နိုင်ခဲ့လေသည်။
ဂရိဒဏ္ဍာရီသည် ဂရိလူမျိုးတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု ဆင့်ကဲတိုးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်းများကို လိုက်လျောညီထွေ နေရာပေးနိုင်ရန် အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲလေ့ရှိသည်။ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော်လည်း အလိုအလျောက် လူများလက်ခံသည့်ပုံစံဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဒဏ္ဍာရီသည် ထိုပြောင်းလဲမှုများ၏ ရည်ညွှန်းချက်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုအဆုံး၌ အများအားဖြင့် တွေ့ရှိရသည့်အတိုင်း ရှင်သန်လျှက်ရှိသော ဂရိဒဏ္ဍာရီ စာပေပုံစံများတွင် ဒဏ္ဍာရီသည် ပင်ကိုယ်အားဖြင့် နိုင်ငံရေးနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်ဟု ဂစ်လ်ဘာ့ ကာ့သ်ဘာ့ဆန် (၁၉၇၅) က ဆိုသည်။[lower-roman 1]
ရှေးဟောင်းခေတ်၏ အလယ်ကာလပြီးနောက် အမျိုးသားနတ်များနှင့် အမျိုးသားသူရဲကောင်းများကြား ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှု ဒဏ္ဍာရီများမှာ ပို၍ ပို၍ ကျယ်ပြန့်လာခဲ့ရာ အမျိုးသား လူကြီးတစ်ဦးနှင့် အရွယ်ရောက် အမျိုးသားလူငယ်တစ်ဦးတို့၏ အိမ်ထောင်ဘက်သဘောဆက်ဆံရေး (ရှေးဟောင်းဂရိ: παιδικὸς ἔρως) သည်လည်း အပြိုင်သဘော ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်ပေသည်။ ယင်းသို့ ကျားလိင်တူ (အသက်ကွာခြား) အလေ့အထသည် ဘီစီ ၆၃၀ ဝန်းကျင်ခန့်က စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ ဘီစီငါးရာအဆုံးပိုင်းခန့်တွင် ကဗျာဆရာများသည် အရေးပါသောနတ်ဘုရားတိုင်းတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဖော်အဖြစ် အနည်းဆုံး အရွယ်ရောက် အမျိုးသားငယ်တစ်ဦးကို ရည်ရွယ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ချွင်းချက်အဖြစ် ထိုသို့သော နတ်ဘုရားများ၌ အဲရီးဇ်နှင့် (အချို့)ထင်ရှားသော နတ်ဘုရားများ မပါဝင်ပေ။ အာခိလိဇ် နှင့် ပါ့ထရောကလပ်စ် တို့ကဲ့သို့သော ထိုစဉ်က တည်ရှိနေသည့် ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများတွင်လည်း (အသက်ကွာ) ကျားလိင်တူ အရိပ်အရောင်များကို ဖော်ထုတ်တင်ပြခဲ့ကြသည်။:54 ပထမအနေဖြင့် အလက်ဇန်းဒရီးယန်းခေတ် ကဗျာဆရာများ၊ ထို့နောက် အစောပိုင်း ရောမခေတ်က စာပေဆိုင်ရာ ဒဏ္ဍာရီ စုဆောင်းပြုစုသူများသည် ဂရိဒဏ္ဍာရီလာ ဇာတ်ကောင်များ၏ ဇာတ်လမ်းများကို ဤပုံစံဖြင့် ပြန်လည် ပြင်ဆင်ရေးသားခဲ့ကြသည်။ (ဂရိဒဏ္ဍာရီဆိုင်ရာ) ကဗျာရှည်များ၏ အောင်မြင်မှုသည် ဇာတ်လမ်းများမြောင်ကို ဖန်တီးရန်ဖြစ်ပြီး ရလဒ်အနေဖြင့် ဒဏ္ဍာရီသဘော ခေတ်ကာလစဉ်ဆက်ပြသမှုပုံစံတစ်ရပ်ကို ဖွံ့ဖြိုးစေခဲ့လေသည်။ ထို့ကြောင့် ဂရိဒဏ္ဍာရီသည် လူသားများနှင့် ကမ္ဘာလောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုကြားရှိ အဆင့်တစ်ခုအနေဖြင့် ဖော်ထုတ်ထားသည့် သဘောဖြစ်ပေသည်။:11 ဤဇာတ်လမ်းပုံပြင်များကိုယ်တိုင်၌ ရှေ့နောက်မညီဖြစ်ပေါ်မှုများရှိရာ လုံးဝတိကျသော အချိန်ပြမျဉ်းသတ်မှတ်ရန် မဖြစ်နိုင်သော်လည်း အနီးစပ်ဆုံး ခေတ်ကာလစဉ်ဆက်ဖြစ်ပေါ်ပုံကို ရိပ်စားသိမြင်နိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်လာသော ဒဏ္ဍာရီ၏ 'ကမ္ဘာလောက သမိုင်း' ကို ကျယ်ပြန့်သည့်ခေတ်ကာလအပိုင်းအခြားအရ သုံးခု (သို့) လေးခု အဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်။
ကမ္ဘာလောကနှင့် နတ်ဘုရားများ၏ ဇာစ်မြစ်
ဇာစ်မြစ်ဒဏ္ဍာရီ (သို့) ဖန်တီးခြင်းဒဏ္ဍာရီ သည် လူတို့၏ ဘာသာစကားဖြင့် စကြဝဠာ၏ အစကို ရှင်းလင်းပြသရန် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။:10 အရာရာ၏ အစသဘောနှင့်ပတ်သက်၍ ဒဿနပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောဆိုမှုတစ်ခုရှိသော်လည်း အကျယ်ပြန့်ဆုံး လက်ခံကြသောမူမှာ ထိုစဉ်က ဟီးဆီးယဒ်၏ အဆိုဖြစ်သည်။ ယင်းအဆိုကို ၎င်း၏ ကဗျာ 'သီယောဂန်နီ' တွင်ပါရှိ၏။ ယင်း၌ နတ္ထိခေါ် အလွန်ကျယ်ပြန့်သော ခေးယော့စ် (Chaos) သဘောတရားဖြင့် စတင်ထားသည်။ ထိုဟင်းလင်းပြင်ကြီးထဲက ဂိုင်ယာ (Gaia - မြေကမ္ဘာ) ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် အခြားရှေးဦး (နတ်)ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည့် အီးရော့စ် (Eros - အချစ်)၊ အဘစ် (Abyss - တားတာရပ်စ် (Tartarus) - ငရဲကဲ့သို့သော နက်ရှိုင်းသည့် အသူရာချောက်ကဲ့သို့)၊ အဲရာဘပ်စ် (Erebus - အမှောင်ထု) တို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ကြသည်။ သဘာဝအလျှောက် (မေထုန်မှုမပြုဘဲ) ဂိုင်ယာမှ ယူရေးနပ်စ် (Uranus - ကောင်းကင်) ကို မွေးဖွားခဲ့၍ ယူရေးနပ်စ်နှင့် ဂိုင်ယာတို့ပေါင်းစပ်ကာ တိုက်တန် (၁၂) ပါး၊ အမျိုးသား (၆) ပါး နှင့် အမျိုးသမီး (၆) ပါး မွေးဖွားခဲ့သည်။ ကျားခြောက်ဦးမှာ အိုဆီးယန်နပ်စ် (Oceanus) ၊ ဆီးယပ်စ် (Coeus) ၊ ခရိုင်းယပ်စ် (Crius) ၊ ဟိုက်ပီးရီးယန် (Hyperion) ၊ အိုင်းယဲ့စ်ပစ်တပ်စ် (Iapetus) ၊ ခရိုးနပ်စ် (Cronus) ၊ နှင့် မခြောက်ဦးမှာ သီးယာ (Theia) ၊ ရီးယာ (Rhea) ၊ သီးမစ် (Themis) ၊ နီမောဇစ်နီး (Mnemosyne) ၊ ဖီးဘီ (Phoebe) ၊ တက်သစ် (Tethys) တို့ဖြစ်ကြသည်။ ခရိုးနပ်စ်မွေးဖွားပြီးနောက် ဂိုင်ယာနှင့် ယူရေးနပ်စ်တို့သည် တိုက်တန်များအား ထပ်မံမွေးမထုတ်ရန် သဘောတူခဲ့ကြပြီး ပထမ ဆိုက်ကလော့များကို မွေးထုတ်ခဲ့ကြကာ ယင်းနောက် ဟက်ကာတောန်ကိုင်းရက်စ် (လက်တစ်ရာ) များထွက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။ ယူရေးနပ်စ်က ထိုမျိုးနွယ်နှစ်ခုလုံးကို တားတာရပ်စ်ထဲသို့ ပစ်ချခဲ့ရာ ဂိုင်ယာမှာ အလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့၏။ ဂိုင်ယာ၏ သားသမီးများအနက် ဉာဏ်များ၍ အဆိုးဝါးဆုံး၊ အငယ်ဆုံးဖြစ်သည့် ခရိုးနပ်စ်ကို ဂိုင်ယာက အယုံသွင်း၍ ဖခင် ယူရေးနပ်စ်ကို နန်းချစေသည်။ ယူရေးနပ်စ် နန်းကျသောအခါ ခရိုးနပ်စ်သည် ဇနီးသည် မောင်နှမတော်စပ်သူ ရီးယာနှင့်အတူ တိုက်တန်တို့ အရှင်ဖြစ်လာခဲ့၏။
သားဖြစ်သူ ဇုစ်က ခရိုးနပ်စ်ကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်သောအခါ ဖခင်နှင့်သား ပဋိပက္ခနှင့်ပတ်သက်၍ တန်ဆာဆင်ဖွဲ့နွဲ့မှုတစ်ခုသည် ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့၏။ ခရိုးနပ်စ်သည် ဖခင် ယူရေးနပ်စ်ကို သစ္စာဖောက်ခဲ့သောကြောင့် ၎င်းသည်လည်း ၎င်း၏ သားသမီးတစ်ဦးဦးက ထိုသို့ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်မည်ကို ကြောက်ရွံ့နေခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍ ရီးယာ ကလေးမွေးဖွားတိုင်း ထိုကလေးများကို လုယူ၍ စားပစ်ခဲ့လေသည်။ ရီးယာသည် ဤလုပ်ရပ်ကို မုန်းတီးကာ ဇုစ်မွေးရာတွင် ကလေးကို ဖွက်ထားပြီး ကျောက်တုံးကို ကလေးအဝတ်ပတ်၍ထားခဲ့ရာ ခရိုးနပ်စ်က မျိုချခဲ့သည်။ ဇုစ် အရွယ်ရောက်သောအခါ ဇုစ်က ခရိုးနပ်စ်ကို ဆေးဖြင့်စီမံထားသော အရည်တစ်မျိုးတိုက်ခဲ့သဖြင့် ခရိုးနပ်စ် အန်ထွက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ အန်ထုတ်ရာတွင် ရီးယာ၏ သားသမီးများဖြစ်သော ပိုဆိုက်ဒန် ၊ ဟေးဒီးဇ် ၊ ဟက်စတီးယာ (Hestia) ၊ ဒစ်မီးတာ (Demeter) ၊ ဟီးရာ (Hera) နှင့် ကျောက်တုံး တို့ဖြစ်သည်။ ဇုစ်သည် ခရိုးနပ်စ်ကို နတ်တို့အရှင်နေရာအတွက် စစ်ပြုရန် စိန်ခေါ်ခဲ့၏။ အဆုံးတွင် ဇုစ်၏ တားတာရပ်စ်မှ ကယ်ထုတ်ခဲ့သော ဆိုက်ကလော့များ၏ အကူအညီဖြင့် ဇုစ်နှင့် မောင်နှမများပေါင်းစည်း၍ တိုက်ပွဲဆင်ရာ ခရိုးနပ်စ်ရှုံးနိမ့်သွားသောကြောင့် ခရိုးနပ်စ်နှင့် ၎င်း၏ တိုက်တန် အပေါင်းအဖော်များကို တားတာရပ်စ်၌ ချုပ်ထားခဲ့ကြသည်။
ရှေးဦးကျသော စံပြကဗျာပုံစံ (ရှေးဦးကျသော ရိုးရာဇာတ်လမ်းသွား ကဗျာများ ) ဖြစ်သော သိယိုဂန်နီကဗျာများ (နတ်ဘုရားတို့၏ မျိုးရိုးဇစ်မြစ်) ကဗျာများနှင့်ပတ်သက်၍ တွေးကြခေါ်ကြ စဉ်းစားကြကာ ထိုကဗျာများတွင် မှော်အစွမ်းများသက်ဝင်သည်ဟုလည်း ဖော်ပြကြသည်။ ဒဏ္ဍာရီလာ ကဗျာဆရာ အောဖီးယပ်စ် သည် သီယိုဂန်နီကဗျာများကို သီဆိုရာ၌ စံပြုထိုက်သော တေးသီဆိုသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်၍ အပေါလိုနီးယပ်စ်၏ အာဂွန်နော့တီကာ ကဗျာတွင် ဆိုထားသည်မှာ ၎င်းသည် ပင်လယ်များနှင့် မုန်တိုင်းများကို ငြိမ်သက်စေရန် သီယိုဂန်နီကဗျာများ ကိုအသုံးပြု (သီဆို) သည်၊ ထို့နောက် ဟေးဒီးစ် ရှိရာ မြေအောက်ကမ္ဘာသို့ သွားရောက်ရာတွင် မြေအောက်ကမ္ဘာရှိ နတ်ဘုရားတို့၏ သံကဲ့သို့မာနေသော စိတ်ဓာတ်များကို ပျော့ပျောင်းညင်သာစေခဲ့သည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဟားမီးဇ်ကလည်း စောင်းတစ်မျိုး (lyre) ကို တီထွင်ခဲ့ပြီးနောက် ပထမဆုံး ၎င်း၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် နတ်ဘုရားတို့၏ မွေးဖွားခြင်းကို သီဆိုမှုဖြစ်ပေသည်။ ဟီးဆီးယဒ်၏ 'သီယိုဂန်နီ' ကဗျာရှည်သည် နတ်ဘုရားများအကြောင်း အပြည့်စုံဆုံး ရှင်သန်ကျန်ရစ်သည့် ဖော်ပြမှုတစ်ခုသာမက ရှေးကျသော ကဗျာဆရာ၏ ဆောင်ရွက်မှုအကြောင်း ဖော်ပြထားသော အပြည့်စုံဆုံး စာပေလည်းဖြစ်သည်။ ယင်းကဗျာရှည်တွင် 'မြူးဇစ်' (Muses) ခေါ် နတ်သမီးများ (ကိုးပါး) ကို ရှည်လျှားစွာဖြင့် နိဒါန်းပျိုး တိုင်တည်မှုလည်း ပါဝင်လေသည်။ သီယိုဂန်နီသည် ယခုပျောက်ဆုံးသွားပြီဖြစ်သော ကဗျာပေါင်းများစွာ၏ အကြောင်းရင်းခံလည်းဖြစ်ကာ ထိုအထဲတွင် အောဖီးယပ်စ်၊ မူဆားယပ်စ်၊ အက်ပစ်မက်နစ်ဒီးဇ်၊ အဘားရစ် နှင့် အခြား ဒဏ္ဍာရီလာ ရှေ့ဖြစ်ဟောဆရာများစွာ အကြောင်းပါရှိခဲ့၍ ထိုကဗျာများကို သီးသန့် သန့်စင်ခြင်းဆိုင်ရာ ရိုးရာဓလေ့များနှင့် ပူဇော်ပသမှု ဓလေ့များတွင် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ပလေးတိုးသည် အောဖီးယပ်စ်၏ သီယိုဂန်နီ(ကဗျာ) မူအချို့ကို ရင်းနီးကျွမ်းဝင်နိုင်သည်ဟု ညွှန်းဆိုချက်များရှိသည်။:147 သို့သော်လည်း ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ရိုးရာဓလေ့များ၊ ယုံကြည်မှုများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှု (silence) ရှိလိမ့်မည်၊ ထိုယဉ်ကျေးမှု အနေအထားသဘောသဘာဝကို ထိုလူမှုအဖွဲ့အစည်းရှိ သူများက ထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့ခြင်း ရှိမည်မဟုတ်ဟု ခန့်မှန်းယူဆနိုင်သည်။ ထိုအယူဓလေ့များသည် (နောက်ပိုင်းတွင်) ဘာသာရေးကျင့်ထုံးများ မဟုတ်တော့သည့်အခါ ယခင်ပြုလုပ်ခဲ့သော ရိုးရာဓလေ့များအကြောင်း သိရှိသူ မရှိသလောက်ဖြစ်သွားပေလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း (ရိုးရာဓလေ့နှင့်ပတ်သက်၍) လုံးဝဥဿုံ လူအများသိရှိပါသည်ဟူသော ဂုဏ်အင်လက္ခဏာများကို သွယ်ဝိုက်ညွှန်းဆိုနိုင်သော ဖော်ပြချက်များတော့ တည်ရှိခဲ့ကြသည်။
ဤလက်ရာ(ပုံ/စာ) အနည်းငယ်သည် ပလေးတိုး၏ တပည့် ဒဿနဆရာများ၏ ကိုးကားဖော်ပြချက်များတွင် ရှင်သန်ကျန်ရစ် တည်ရှိခဲ့ကာ မကြာသေးမီက တူးဖော်ရရှိသော ကျူပင်မှ ပြုလုပ်သော စက္ကူ အပိုင်းအစအကြွင်းအကျန်များတွင်လည်း တွေ့ရသည်။ ဤအကြွင်းအကျန်များထဲမှ တစ်ခုသည် 'ကျူစာလိပ်' (Derveni Papyrus) ဖြစ်၍ အော်ဖီးယပ်စ်၏ 'နတ်ဘုရားမျိုးရိုးဇစ်မြစ်' နှင့် 'စကြာဝဠာအကြောင်း' ဖွဲ့နွဲ့သည့် ကဗျာတစ်ပုဒ်သည် အနည်းဆုံး ဘီစီ ငါးရာခန့်တွင် တည်ရှိခဲ့ပါသည်ဟု ယခုဆိုလျှင် သက်သေပြနိုင်ပေသည်။:236:147
ဂရိတို့ ကိုးကွယ်သော နတ်ဘုရားများ
ဂန္ထဝင်ခေတ် ဒဏ္ဍာရီအရ တိုက်တန်များကို နန်းချပြီးနောက် အသစ်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသော နတ်ဘုရားများ[မှတ်စု 2]ကို အတည်ပြုခဲ့ကြ၏။ အဓိက ဂရိနတ်ဘုရားများမှာ ဇုစ်၏ စောင့်ကြည့်မှုအောက်တွင်ရှိသော အိုလံပတ်တောင်တွင် စံကြသော အိုလံပတ်တောင်နတ်ဘုရားများ ဖြစ်ကြသည်။ (အရေအတွက်ကို (၁၂)ပါးဟုဆိုကြရာ ထိုဂဏန်းသည် ခေတ်သစ်စိတ်ကူးအယူအဆတစ်ခု ဖြစ်ဟန်တူသည်။):8 အိုလံပတ်တောင်နတ်ဘုရားများအပြင် ကျေးလက်နယ်တခွင်မှ အမျိုးမျိုးသော နတ်များကိုလည်း ကိုးကွယ်ပူဇော်ကြ၏။ ၎င်းတို့မှာ ဆတီရော့စ် နတ်မျိုးဖြစ်သည့် ပန်နတ် (Pan) ၊ မြစ်/တော/တောင်... စောင့်နတ်သမီးများ (Nymph) ၊ နိုင်းယဒ် ခေါ် ရေစမ်းနတ်သမီးများ (Naiad) ၊ မြစ်စောင့်နတ်များ၊ ဒရိုင်းယဒ် ခေါ် သစ်ပင်စောင့်နတ်သမီးများ (Dryad) ၊ နစ်ယာရစ်ယစ် ခေါ် ပင်လယ်နေ နတ်သမီးများ (Nereid) ၊ ဆတီရော့စ်များနှင့် အခြားနတ်များစွာ ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အက်ရင်းနစ် (သို့) ဖြူရီ နတ်ဝိဉာဉ်များကဲ့သို့သော အမှောင်စွမ်းအားရှိသူများလည်း ရှိကြ၍ ၎င်းတို့သည် သွေးသားတော်စပ်မှုဆိုင်ရာ အပြစ်လုပ်သူများကို နောက်မှ လိုက်လံရှာဖွေကြသူများဟု ဆိုကြသည်။ ဂရိတို့၏ ကိုးကွယ်ကြသော နတ်အပေါင်းကို ချီးကြူးဂုဏ်ပြုပူဇော်ရန် ကဗျာဆရာများက ဟိုးမားဓမ္မတေးများ (၃၃ ပုဒ်) ကို ရေးဖွဲ့ခဲ့ကြသည်။ ဂရက်ဂရီ နော့ဂျ် (၁၉၉၂) က ထိုများပြားသော ဟိုးမားဓမ္မတေးများကို (သီယိုဂန်နီနှင့် နှိုင်းစာပါက) သာမန် ရှေ့ပြေး သီချင်းများဟု သတ်မှတ်၍ တစ်ပုဒ်စီသည် နတ်ဘုရားတစ်ပါးကို တိုင်တည်ရွတ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။:54
အချို့သော ပညာရှင်များက ယုံကြည်သည်မှာ:10 ဟဲရာကလီးဇ်၏ ရှုပ်ထွေးသော ဒဏ္ဍာရီနောက်ကွယ်တွင် အမှန်စင်စစ် လူသားတစ်ဦးရှိလောက်မည်၊ ထိုလူသားသည် အားဂေါ့စ်တိုင်းပြည်၏ လက်အောက်ခံ မျိုးနွယ်တစ်ခု၏ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။ အခြား ပညာရှင်အချို့က ဟဲရာကလီးဇ်ဇာတ်လမ်းသည် ဇိုးဒယပ်ခေါ် (၁၂) ရာသီခွင်ကို နှစ်စဉ်လှည့်လည်နေသော နေ၏ ဖြတ်သန်းခြင်းကို တင်စားချက်ဟူ၍ ညွှန်းဆိုဖော်ပြကြသည်။ နောက်ထပ် အခြား အခြားသော ပညာရှင်များကမူ အခြေတကျရှိနေပြီးဖြစ်သော သူရဲကောင်းဒဏ္ဍာရီများကို ဒေသဆိုင်ရာ လိုက်ရောညီထွေ ပြုပြင်ယူ၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော ဒဏ္ဍာရီ အဖြစ် ထောက်ပြကြလျှက် အခြားသော ယဉ်ကျေးမှုများမှ ပို၍စောသော ဒဏ္ဍာရီများကို ရည်ညွှန်းကြသည်။ ရိုးရာစဉ်ဆက်အားဖြင့် ဟဲရာကလီးဇ်သည် ဇုစ်နှင့် အဲ့လ်(က်)မီးနီ တို့၏ သားဖြစ်၍ မိခင်မှာ ပါးဆီးယပ်စ် ၏ မြေးတော်သည်။ရိုးရာပုံပြင်ဇာတ်လမ်းများမှ အကြောင်းအရာများနှင့်အတူ ၎င်း၏ အံ့နဘန်း တစ်ကိုယ်တည်း စွန့်စားခန်းများသည် ခေတ်ပေါ် ဒဏ္ဍာရီ ရာဇဝင် ဇာတ်လမ်းများစွာကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့လေသည်။ ဘားကာ့တ် (၂၀၀၂) အရ " ဟဲရာကလီးဇ်ကို ကိုယ်ကျိုးစွန့်သူအဖြစ်ဖော်ပြပါတယ်၊ နောက်ထပ် ၎င်းကို ယဇ်ပူဇော်တဲ့ ပုလ္လင်များကို စတင်တည်ထောင်သူအဖြစ်လည်း ဖော်ပြပါတယ်။ အစားအသောက် အလွန်အကျွံစားနိုင်သူတစ်ဦးလို့လည်း စိတ်ကူးပြီး ရေးကြပါတယ်။ ဟာသခန်းတွေမှာ တင်ဆက်ကြတာကတော့ ဟဲရာကလီးဇ်ကို အစားအသောက်ကျူးသူဆိုပြီး ဖြစ်တယ်ဗျ။"
ဟဲရာကလီးဇ်သည် ဒေါရီယန်ဘုရင်တို့၏ တရားဝင်ဘိုးဘေးဖြစ်ခြင်းမှတဆင့် လူမှုရေးရာ အမြင့်ဆုံး ဂုဏ်ဒြပ်ကို ရရှိခဲ့လေသည်။ ဤသို့ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကပင် ဒေါရီယန်မျိုးနွယ် ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူများ 'ပဲလာပါနီးဇ်' ကျွန်းဆွယ်သို့ ဝင်ရောက်လာခြင်းကို တရားဝင်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ဟစ်လပ်စ် (Hyllus) သည် ဒေါရီယန်မျိုးနွယ်စု သူရဲကောင်းဖြစ်ပြီး ဟဲရာကလီးဇ်၏ သားဖြစ်သည်။ အခြားသော ဟဲရာကလီးဇ်၏ သားမြေး မျိုးဆက်များတွင် မာကဲရီးယာ (Macaria) ၊ လားမို့စ် (Lamos) ၊ မန်တို (Manto) ၊ ဘိုင်ယန်နော် (Bianor) ၊ လစ်ပေါလစ်မပ်စ် (Tlepolemus) ၊ တဲလစ်ဖာ့စ် (Telephus) တို့ပါဝင်ကြသည်။ ဤ မျိုးဆက်များသည် မိုက်ဆီးနီ၊ စပါတာ၊ အာဂေါ့စ် တိုင်းပြည်များရှိသည့် ပဲလာပါနီးဇ်ကျွန်းဆွယ်ဒေသကို အောင်မြင်ခဲ့ကြပြီး ရာဇဝင်သမိုင်းတစ်ခုအရ ၎င်းတို့သည် ထိုဒေသကို (တိုင်းပြည်များကို) ရှေးဘိုးဘေးများမှတဆင့် အုပ်စိုးပိုင်ခွင့် ရှိသည်ဟုလည်း အခိုင်အမာဆိုခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကို ဒေါရီယန်ကျူးကျော်ခြင်း (Dorian invasion) ဟု ရံခါ၌ ခေါ်ဆိုကြသည်။ လစ်ဒီယားနှင့် နောက်ပိုင်းမှ ပေါ်လာသော မက်စီဒိုးနီးယား ဘုရင်များသည်လည်း ဟဲရာကလီးဇ်၏ မျိုးဆက်များဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။:211
အေးထရီးယပ်စ်နှင့် သိုင်းယက်စတီးဇ် အိမ်တော် ဇာတ်လမ်းတွဲများ
အန်းရစ်ကဲ စီမွန်နတ်ရေးဆွဲသော El Juicio de Paris (ပါရိစ်၏ ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ခြင်း) ပုံ၊ ပါရိစ်သည် ညာဖက်လက်တွင် ရွှေရောင်ပန်းသီးကို ကိုင်၍ နတ်သမီးများကို တွက်ဆဟန်ဖြင့် လေ့လာအကဲဖြတ်နေခြင်း။
Giovanni Battista Tiepolo ရေးဆွဲသော "အာခိလိဇ်၏ အမျက်ဒေါသ" (၁၇၅၇ ခုနှစ်, နံရံဆေးရေး, 300 x 300 cm, ဗစ်ဆန်းရှန်မြို့ရှိ Villa Valmarana) ပုံတွင် စစ်ပွဲဆုလဒ်ရခဲ့သော ဘရိုင်းဆီးယစ်(အမျိုးသမီး) ကို အဲဂါမန်းနန်က သိမ်းမည်ဟု ခြိမ်းချောက်ရာ အာခိလိဇ်က ဒေါသထွက်၍ ၎င်းကိုသတ်ရန် ဓါးဆွဲထုတ်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ် အသီးနာနတ်ဘုရားမ ပေါ်လာပြီး အာခိလိဇ် ဆံပင်ကို ဆွဲ၍ အကြမ်းဖက်မှုမဖြစ်အောင်တားဆီးနေပုံ။
ဂရိဒဏ္ဍာရီသည် ဂရိနှင့် ထရွိုင်တို့ကြား တိုက်ခိုက်ကြသော ထရိုဂျန်စစ်ပွဲနှင့် စစ်အပြီးကာလများတွင် အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိလာသည်။ ဟိုးမား၏ အိလိယဒ် ကဲ့သို့သော လက်ရာများတွင် အဓိကဇာတ်လမ်းအကြောင်းရာကို ပုံသွင်းခဲ့ရာ နောက်ပိုင်းတွင်လည်း တစ်သီးတစ်ခြားအကြောင်းအရာများကိုလည်း ပိုမိုပြည့်စုံလာစေရန် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့် ဂရိပြဇာတ်များ၌ ဖြစ်၏။ ထရိုဂျန်စစ်ပွဲသည် ရောမယဉ်ကျေးမှုတွင် စိတ်ဝင်စားမှု အကြီးအကျယ် ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ထရိုဂျန်စစ်ပွဲ သူရဲကောင်း အစ်နီးယပ်စ် ကြောင့်ဖြ၏။ စာရေးဆရာ ဗားဂျစ်လ်၏ 'အင်နီးယစ်ဒ်' ကဗျာအရ အစ်နီးယပ်စ်သည် ထရွိုင်မြို့မှ ခရီးစဉ်ထွက်ရှိပြီး တစ်နေ့တွင် ရောမမြို့ဟု သိရှိလာမည့် မြို့တော်တည်ထောင်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ (ဗားဂျစ်လ်၏ အင်နီးယစ်ဒ် ကဗျာ စာအုပ်အမှတ် (၂) တွင် ထရွိုင်မြို့ ဖျက်ဆီးခံရခြင်း လူသိအများဆုံးအကြောင်း ပါဝင်၏။) နောက်ဆုံးတွင် လက်တင်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော ထိုရာဇဝင်ကျမ်းအတုနှစ်ခုကို Dictys Cretensis နှင့် Dares Phrygius အမည်ဖြင့် လက်ဆင့်ကမ်းလာခဲ့သည်။
ထရိုဂျန်စစ်ပွဲသည် များစွာသော အကြောင်းအရာများကို ထောက်ပံ့ထားပြီး ရှေးခေတ် ဂရိပန်းချီ၊ ပန်းပုဆရာများအတွက် စိတ်ကို လှုံဆော်ပေးနိုင်သော အဓိကရင်းမြစ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည် (ဥပမာ ထရွိုင်မြို့ ပျက်စီးခြင်းကို မှုန်းချယ်ထားသော အသီးနာဘုရားကျောင်း 'ပါးသစ်နန်' (Parthenon) ရှိ နံရံဖောင်းကြွရုပ်တုများ (metope) )။ ထရိုဂျန် ဇာတ်လမ်းတွဲများမှ ယူငင်ထားသော အကြောင်းအရာများကို ပန်ချီ ပန်ပုပညာရှင်များ၏ နှစ်သက်မှုသည် ရှေးခေတ်ဂရိ ယဉ်ကျေးမှုကို ညွှန်းဆိုနေခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ဤအကြောင်းအရာ ဒဏ္ဍာရီဖြစ်ရပ်သည် နောက်ပိုင်း ဥရောပစာအရေးအသားများစွာတွင်လည်း စေ့ဆော်မှုများ ပေးနိုင်ခဲ့၏။ နမူနာအနေဖြင့် ထရိုဂျန်အကြောင်း အလယ်ခေတ် ဥရောပစာရေးဆရာများသည် ဟိုးမား(စာပေ)နှင့် တိုက်ရိုက်အသိအားဖြင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိကြဘဲ ထရွိုင်ရာဇဝင်ကို သူရဲကောင်းရေးရာနှင့် ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးဖွယ် ဇာတ်လမ်း၊ ၎င်းတို့လက်ခံထားသည့် မဟာဆန်သော၊ သူရဲကောင်းဆန်သော စံနှုန်းများနှင့် ကွက်တိဝင်သည့် အထူးသင့်လျှော်သော ဇာတ်အိမ်တစ်ခုအဖြစ် တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ၁၂ ရာစု စာရေးဆရာများဖြစ်သော ဘန်နွား ဒီ ဆန့်-မောရ် (Benoît de Sainte-Maure ) ၏ ထရွိုင်မှ ချစ်ဇာတ်လမ်းများ (Roman de Troie; Romance of Troy, 1154–60) ၊ အက်ဇစ်တာမြို့မှ ဂျိုးဇက် (ဇစ်) (Joseph of Exeter) ၏ "ထရိုဂျန်စစ်ပွဲတွင်" (De Bello Troiano; On the Trojan War, 1183) စသည့်စာအုပ်များသည် Dictys နှင့် Dares ကဗျာများမှ တွေ့ရှိရသော မူကိုပြန်လည်ရေးသား၍ စစ်ပွဲအကြောင်း ဖော်ပြထားကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ရောမစာရေးဆရာ ဟောရစ်၏ အကြံစိတ်ကူးနှင့် ဗားဂျစ်လ်၏ နမူနာများကို အတုယူ၍ လုံးဝမတူကွဲပြားသော ဇာတ်လမ်းအသစ်တစ်ပုဒ်ကို ပြောဆိုခြင်းအစား ထရွိုင်အကြောင်းကို (ထိုသို့) ပြန်လည်ရေးသားခဲ့ကြသည်။
ဒဏ္ဍာရီနှင့်ပတ်သက်၍ ဂရိနှင့် ရောမတို့၏ အယူအဆများ
ဒဿန နှင့် ဒဏ္ဍာရီ
အမှားကျူးလွန်သူအပေါ် လက်စားချေခြင်းပြုပြီးနောက် ကျွန်ုပ်လည်း ချက်ချင်းသေရနိုင်သည်လော... ဒါဆို ဒီမှာ (ကမ္ဘာမြေ) ကျွန်ုပ် မနေနိုင်တော့ပါဟု ကမ္ဘာမြေရဲ့ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ လကွေးပုံသင်္ဘောကြီး (ရှေးခေတ်ဂရိပုံစံသင်္ဘော) တစ်ခုဘေးတွင် (ရူးကြောင်ကြောင်) လှောင်ရယ်နေပေ​တော့သည်[မှတ်စု 3]။
ဟဲလင်နစ်စတစ်ခေတ်နှင့် ရောမခေတ် ဆင်ခြင်တုံတရားဝါဒ
ရှေးရောမခေတ်ကာလများတွင် ဂရိနတ်ဘုရားများနှင့် အခြားတိုင်းတပါး နတ်များအား ရောနှော ပေါင်းစပ်ခြင်းများမှတစ်ဆင့် ရောမဒဏ္ဍာရီ အသစ်တစ်ခု မွေးဖွားလာခဲ့သည်။ ရောမများတွင် ကိုယ်ပိုင်ဒဏ္ဍာရီ မရှိသလောက်ဖြစ်သောကြောင့် ဤသို့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ဂရိဒဏ္ဍာရီ ရိုးရာဓလေ့များကို အမွေရလိုက်ခြင်းသည် ၎င်းတို့အဓိက ကိုးကွယ်သော ရောမနတ်ဘုရားများကို တူညီသော ဂရိနတ်ဘုရားများ၏ စရိုက်ဝိသေသ လက္ခဏာများအား ရရှိသွားစေခဲ့သည်။:88 ဇုစ် နှင့် ဂျူပီတာ တို့သည် ဒဏ္ဍာရီ ထပ်တူညီနေမှု၏ ဥပမာတစ်ရပ်ဖြစ်လေသည်။ ဤသို့ ဒဏ္ဍာရီနှစ်ခု၏ ရိုးရာဓလေ့များပေါင်းစပ်ခြင်းအပြင် ရောမတို့၏ အရှေ့ဖက်က ဘာသာတရားများနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိခြင်းကလည်း နောင်ထပ်ပို၍ ရောနှောပေါင်းစပ်မှုများကို ဖြစ်စေခဲ့၏။ နမူနာအနေဖြင့် နေကိုးကွယ်မှုကို ရောမတွင် မိတ်ဆက်စတင်ခဲ့ရာ ရောမဧကရာဇ် အောရီးလီယန်၏ ဆီးရီးယားကို အောင်မြင်သော စစ်ဆင်ရေးအပြီးတွင်ဖြစ်ပေသည်။ အာရှဖက်က နတ်များဖြစ်သည့် မစ်သရာစ် ('နေ' ဟုဆိုလိုသည်) နှင့် ဘာအယ်လ် တို့သည် အပေါလိုနှင့် ဟီးလိယပ်စ်တို့နှင့် ပေါင်းစပ်သွားကြပြီး ဆော်လ် အင်ဗစ်တပ်စ် (Sol Invictus) ဖြစ်သွားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ယင်းနတ်ဘုရားတွင် စုပေါင်းစပ်ပေါင်း ရိုးရာထုံးတမ်းဓလေ့များနှင့် ပေါင်းစပ် အရည်အသွေးများပါရှိသည်။ အပေါလိုကို ဘာသာရေးတွင် ဟီးလိယပ်စ် (သို့) ဒိုင်ယာနိုက်ဆပ်စ်ဟူ၍ ဖော်ပြနိုင်ချေရှိသည်။ သို့သော် ၎င်း၏ ဒဏ္ဍာရီကို ဖော်ပြသော စာပေများက ထိုသို့ဖြစ်ပေါ်သွားခြင်းကို ညွှန်းဆိုနိုင်ခြင်း မရှိသလောက်ပင်ဖြစ်သည်။ ရိုးရာ စာပေလာ ဒဏ္ဍာရီများသည် တကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးသော ဘာသာရေးဓလေ့များနှင့် အတော်ကို ပတ်သက်မှုမရှိပေ။ ဧကရာဇ်နှင့် အင်ပါယာကို ကာကွယ်သူအဖြစ် ဆော်လ်ကို ကိုးကွယ်ခြင်းသည် နန်းတွင်း၏ အဓိကဘာသာရေးဖြစ်လာခဲ့ကာ နှောင်းကာလတွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာမှ နေရာဝင်ယူခဲ့သည်။
နှိုင်းယှဉ်လေ့လာနည်းစနစ်နှင့် စိတ်ပိုင်းစိစစ်သုံးသပ် နည်းစနစ်
၁၉ရာစုတွင် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာ ဝေါဟာရဗေဒဘာသာရပ် ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်း၊ ၂၀ ရာစုတွင် လူမျိုးစု သိပ္ပံဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများတို့ကြောင့် ဒဏ္ဍာရီ သိပ္ပံဘာသာရပ် (science of myth) အခြေတည်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ အရိုင်းသဘာဝ ဖော်ကျူးတင်ပြခြင်းခေတ် ကတည်းက ဒဏ္ဍာရီလေ့လာမှုတိုင်းသည် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာသည့် သဘောဖြစ်လာခဲ့ပေသည်။ ဗီလ်ဟိန်း မန်ဟာ့ဒ် (Wilhelm Mannhardt) ၊ ဂျိမ်းစ် ဖရေးဇာ (James Frazer) ၊ စတစ်သ် တောမ်ဆန် (Stith Thompson) စသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ရိုးရာပုံပြင်များနှင့် ဒဏ္ဍာရီ အကြောင်းအရာများကို ခွဲခြားရန်နှင့် စုဆောင်ရန် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာသည့် ချဉ်ကပ်မှုနည်းလမ်းကို အသုံးချခဲ့ကြသည်။ ၁၈၈၁ တွင် အဒ်ဝါ့ဒ် ဘားနက် တိုင်လာ သည် ၎င်း၏ "ရှေးဦးယဉ်ကျေးမှု" (Primitive Culture) ကိုထုတ်ဝေခဲ့ရာ ယင်းစာအုပ်တွင် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာ နည်းစနစ်ကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး ဘာသာရေး၏ မူလအစနှင့် ဆင့်ကဲတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကို ရှင်းလင်းပြသရန်လည်း ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။:9 တိုင်လာ၏ ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းနှင့် အလွန် တသီးတခြားဖြစ်နေသော ယဉ်ကျေးမှုများ၏ ဒဏ္ဍာရီများကို အတူတကွ စုရုံးထုတ်နှုတ်တင်ပြသည့် လုပ်နည်းလုပ်ဟန်သည် ကားလ် ယွန်း နှင့် ဂျိုးဇက် ကမ်းဘဲလ် တို့နှစ်ဦးလုံးကို လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့သည်။ မက်ခ်စ် မွတ်လာသည်လည်း ဒဏ္ဍာရီလေ့လာရာတွင် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာ ဒဏ္ဍာရီဘာသာရပ် အသစ်ကို အသုံးချခဲ့ပြီး အာရိယန်များ၏ မူရင်းလိုမဟုတ်တော့သည့် သဘာဝတရားကိုးကွယ်ခြင်း အကြွင်းအကျန်များကို စုံစမ်းခဲ့သည်။ ဘရောန်ညီးစဝါ့ဖ် မာလင်းနော့စကီး (Bronisław Malinowski) သည် ဒဏ္ဍာရီ၏ လူမှုရေးရာ အသုံးများသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်းအား အလေးနက်ထား ပြောဆိုခဲ့သည်။ ကလော လေးဗီ-စထရောက်စ်နှင့် အခြား 'ဆက်နွယ်ဖွဲ့စည်းပုံ လေ့လာသည့်ပညာရှင်' (structuralists) များက ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ဒဏ္ဍာရီများတွင် ရှိကြသော အပြင်ပန်း ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုနှင့် ပုံစံများကို နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။
"လူသားနှင့်ပတ်သက်၍ အမြဲထာဝရနှင့် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ အယူအဆ" ၊ "ဒဏ္ဍာရီ အမြင်ရှုထောင့်တစ်ခု"ကို ဇီးခ်မွန် ဖရွိုက် (Sigmund Freud) က 'ဖိနှိပ်ခံ စိတ်ကူးအယူအဆတို့ကို ဖော်ပြခြင်း' ဟူ၍ မိတ်ဆက်တင်ပြခဲ့သည်။ အိပ်မက် အနက်ထုတ်ဖော်ပြန်ဆိုခြင်း (သဘောတရား) သည် ဖရွိုက်၏ ဒဏ္ဍာရီအား အနက်ထုတ်ဖော်ခြင်း၏ အခြေခံဖြစ်သည်။ အိပ်မက်/မသိစိတ် စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖရွိုက်၏ အယူအဆသည် အိပ်မက်တစ်ခု၌ ပါဝင်သော အခြေခံအခြင်းအရာတစ်ခုချင်းဆီကို အနက်ထုတ်ဖော်ခြင်းအတွက် ဆက်စပ်အခြေနေအကြောင်းတရားများ ဆက်နွယ်နေခြင်း၏ အရေးပါမှုဟု အသိအမှတ်ပြု လက်ခံသည်။ ဖရွိုက်၏ အတွေးတွင် ဤသို့ ညွှန်းဆိုလိုက်ခြင်းသည် ဒဏ္ဍာရီအား ဖွဲ့နွယ်ဆက်ယှက်ပုံကိုအထူးပြုလေ့လာနည်း နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သုံးသပ်လေ့လာနည်းကြား ပြန်လည်သင့်မြတ်စေမည့် အရေးကြီးသည့်အချက်ကို ရှာဖွေပေးနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ကားလ် ယွန်းသည် အမြဲတမ်းနှင့် စိတ်ပိုင်းသုံးသပ် ချဉ်းကပ်လေ့လာမှုကို ၎င်း၏ "သမူဟ မသိစိတ်" (collective unconscious) နှင့် "ပကတိ ပုံစံ" (archetypes) သဘောတရားဖြင့် ချဲ့ထွင်ခဲ့ကာ 'ရှေးဦးကျသော (သို့) ပကတိဖြစ်သော (သို့) ထပ်တလဲလဲဖြစ်သော' "ပကတိပုံစံ"သည် ဒဏ္ဍာရီထဲတွင် အများအားဖြင့် ဝှက်ထားသောအရည်အသွေးမျိုးဖြင့် ပါဝင်လေ့ရှိပြီး ဒဏ္ဍာရီသည်လည်း ထို ဝှက်ကွယ်ထားသော အရည်အသွေးမှ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည် (ဟုဆိုသည်)။ ယွန်းအဆိုအရ "ဒဏ္ဍာရီကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသော တည်ဆောက်ပုံအခြင်းအရာများ"သည် (လူတို့၏) မသိစိတ်အနေအထားတွင် တည်ရှိနေရမည်။ ကားလ်ယွန်း၏ နည်းစနစ်ကို "ဂျိုးဇက် ကမ်းဘဲလ် သီအိုရီ" နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ ရောဘတ် အေ ဆက်ဂယ်လ် (၁၉၉၀) က "ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုကို အနက်ဖော်ထုတ်ရာတွင် ကမ်းဘဲလ်က ဒဏ္ဍာရီအတွင်းရှိ ပကတိပုံစံ (archetypes) များကို ရိုးရှင်းစွာ ခွဲခြားဖော်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အောဒဆီကို ဘာသာပြန်အနက်ယူရာတွင် အောဒစ်ဆီးယပ်စ်၏ ဘဝသည် သူရဲကောင်းပုံစံနှင့် ကိုက်ညီသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် ကားလ်ယွန်းက ပကတိပုံစံများကို ခွဲခြားဖော်ပြခြင်းသည် ဒဏ္ဍာရီကို အနက်ဖော်ထုတ်ရာ၌ ပထမအဆင့်မျှသာ ဖြစ်ကြောင်း စဉ်းစားသည်။" ဂရိဒဏ္ဍာရီတွင် ခေတ်သစ်လေ့လာမှုဘာသာရပ်များအား တည်ထောင်သူတစ်ဦးဖြစ်သော ကား ကဲရီညီး (Karl Kerényi) သည် ဂရိဒဏ္ဍာရီ၌ ယွန်း၏ ပကတိပုံစံ သဘောတရားကို လက်ခံကျင့်သုံးနိုင်ရန် ၎င်း၏ ဒဏ္ဍာရီအား အစောပိုင်း ကျင့်သုံးသော ရှုထောင့်များကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ပေသည်။:38
ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရပ်နှင့် ဒဏ္ဍာရီစုဆောင်းဖန်တီးခြင်းပညာရပ် ( ရံခါတွင် ဒဏ္ဍာရီ အနုပညာပုံဖော်ခြင်း ပညာရပ်) (mythography) တို့က ဖော်ထုတ်တင်ပြထားသည်မှာ အာရှအနောက်ကျွန်းဆွယ်နှင့် အရှေ့ဖျားမကျတကျဒေသများမှ လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဟု ဖြစ်သည်။ အနာတိုးလိယာ ယဉ်ကျေးမှုတွင် ဇာစ်မြစ်ဖြစ်သော ဆစ်ဘစ်လီ နတ်ဘုရား၏ တူညီသော ဂရိနတ်ဘုရားမှာ အဒိုးနစ် (Adonis) ဖြစ်၍ ဒဏ္ဍာရီထက် ကိုးကွယ်မှုတွင် ပို၍သက်ဆိုင်သည်။ တစ်ဖက်တွင် အဲဖရာဒိုက်တီကို အနုပညာပုံဖော်မှု ခပ်များများသည် ဆစ်မစ်တစ် (ဂျူး/အာရပ် စသည်) နတ်သမီးများမှ ပေါက်ဖွားလာနိုင်ချေရှိသည်။ ထို့ပြင် ကမ္ဘာဦးမှ နတ်ဘုရား (တန်ခိုးစွမ်းအား) မျိုးဆက်များဖြစ်သော "ခေးအော့စ် (ခေးယော့စ်) နှင့် သားသမီးများ" နှင့် အက်နူးမာ အဲလစ်ရှ် (Enûma Eliš - ဘာဘီလုံ ဖန်တီးခြင်းဒဏ္ဍာရီ) ဒဏ္ဍာရီတွင် ပါရှိသော 'တီယန်မတ်'နတ်ဘုရားမ တို့၏ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တူညီမှုများလည်း တွေ့ရှိရသည်။ မဲ့ယာ ရေးန်ဟိုး အရ "အရှေ့ဖျားမကျတကျ နိုင်ငံများ၏ ဘာသာရေး အယူအဆများ၌ အာဏာအတွက် ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းမှုများ၊ မျိုးဆက်များ၏ ပဋိပက္ခများမှတစ်ဆင့် နတ်ဘုရားများ နန်းတက်ခြင်းအကြောင်း ပါဝင်ပြီး ထိုအယူအဆများသည် ၎င်းတို့၏ လမ်းကြောင်းကို. . . ဂရိဒဏ္ဍာရီတွင် တွေ့ရှိသွားခဲ့ကြသည်။"
အိန္ဒိယ-ဥရောပ နှင့် ​အရှေ့ဖျားမကျတကျ ဒေသများ၏ မူလဇာစ်မြစ်များအပြင် ဂရိဒဏ္ဍာရီသည် ၎င်းမပေါ်မီတည်ရှိခဲ့ကြသော လုမှုအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် ခရီးတီး၊ မိုက်ဆီးနီ၊ ပိုင်းလော့စ်၊ သီးဗာ၊ အော်ခေါ်မန်းနော့စ် တို့၏ ပါဝင်ပတ်သတ်ခြင်းများရှိသည်ဟု အချို့ပညာရှင်များက တွက်ချက် ယူဆကြသည်။:23 ဘာသာရေး သမိုင်းဆရာများကို ခရီးတီးဒေသနှင့် ဆက်စပ်သော ဒဏ္ဍာရီ၏ ရှေးခေတ် ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်များက စိတ်ပါဝင်စားစေသည်။ (ဥပမာဇာတ်လမ်းများမှာ : နွားသိုးနတ်ဘုရား၊ ဇုစ်နှင့် ယူရိုးပါ၊ နွားသိုးကို အရှုံးပေး၍ 'မစ်​နောတော' ကိုမွေးဖွားခဲ့သည့် ပါဆက်ဖာယီး စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်။) မာတင် ပီ နစ်လ်ဆန်က နတ်ဘုရားတို့၏ ယေဘုယျဆောင်ရွက်ချက်နှင့် ကိုယ်စားပြုမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ မစ်နိုးယန်နတ်ဘုရားများနှင့် ဘာသာရေးအယူအဆတို့သည် မိုက်ဆီးနီးယန် ဘာသာတရားတွင် ပေါင်းစပ်ရောနှောသွားခဲ့သည်ဟု ရဲရဲတင်းတင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဆက်လက်၍ ကောက်ချက်ချသည်မှာ ကြီးကျယ်လှသော ဂန္ထဝင် ဂရိဒဏ္ဍာရီများသည် မိုက်ဆီးနီ (ယဉ်ကျေးမှု)အချက်အချာများနှင့် ဖက်တွယ်ချည်နှောင်ထား၍ သမိုင်းမတင်မီခေတ်ကာလများ၌ မှီတွယ်ကျောက်ချထားသည်ဟု ဆိုပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဘားကာ့တ်၏ အဆိုအရဆိုလျှင် ခရီးတီး နန်းဆက်ခေတ်ကာလ၏ အနုပညာလက်ရာ ဖော်ပြချယ်မှုန်းမှုများသည် အထက်ပါ သဘောတရား သီအိုရီများအတွက် ခြေခြေမြစ်မြစ် အတည်ပြုချက် မပေးနိုင်သလောက်ပင်ဖြစ်သည်။:24
အနောက်တိုင်း ပန်းချီ၊ ပန်းပုနှင့် စာပေတို့မှ တန်ဆာဆင်မှုန်းချယ်မှုများ
ဘောတစ်ချဲလီ၏ ဆီဆေးပန်းချီဖြစ်သည့် "ဗီးနပ်စ် မွေးဖွားခြင်း" (၁၄၈၅-၁၄၈၆ ဝန်းကျင်) ၊ ပြန်လည်ဖော်ထုတ် ဆန်းသစ်ထားသည့် Venus Pudica၊ ဤလက်ရာပန်ချီသည်ရှေးရိုးရာဘာသာတရားတစ်ခုအတွက်ဖြစ်ပြီး မကြာခဏဆိုသလို ခေတ်သစ်ကြည့်ရှုသူများအတွက် ရီနေဆွန်းကာလ (ခေတ်ဆန်းချိန်) အနှစ်သာရ၏ စံနမူနာဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ (ယူဖစ်ဆီ အနုပညာပြတိုက်၊ ဖလောရန့်စ်မြို့)
ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းသည် ဒဏ္ဍာရီများအား လူကြိုက်များမှုကို အဟန့်အတားမဖြစ်စေခဲ့ပေ။ ခေတ်ဆန်းချိန်ကာလ[မှတ်စု 4] (Renaissance) တွင် ဂန္ထဝင်ရှေးဟောင်းအတိတ်များကို ပြန်လည်တူးဆွဖော်ထုတ်ကြခြင်း နှင့်အတူ အောဗစ် (Ovid) ကဗျာလင်္ကာများသည် ကဗျာ၊ ပြဇာတ်၊ ဂီတ၊ ပန်ချီ၊ ပန်းပု ဆရာများအတွက် အဓိက လွှမ်းမိုးနိုင်သည့် အားတစ်ရပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ခေတ်ဆန်းချိန်ကာလ အစောပိုင်းနှစ်များမှစ၍ လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီ၊ မိုက်ကယ်အိန်ဂျလို၊ ရာဖေးယယ်လ် ကဲ့သို့သော ပန်းချီဆရာများသည် ရိုးရာခရစ်ယာန် အဓိကအကြောင်းအရာများကို ရေးဆွဲသည့်အပြင် ဂရိဒဏ္ဍာရီမှ နတ်ကိုးကွယ်မှု (ရိုးရာဘာသာ) အကြောင်းအရာများကိုလည်း ရေးဆွဲချယ်မှုန်းခဲ့ကြသည်။ လက်တင်စာပေ၊ အောဗစ်၏ လက်ရာများမှတစ်ဆင့် ဂရိဒဏ္ဍာရီသည် အလယ်ခေတ် (medieval) နှင့် ခေတ်ဆန်းချိန်ကာလမှ အီတလီကဗျာဆရာများဖြစ်သော ပီးထရာ့ခ် (Petrarch) ၊ ဘိုကာ့ရှို (Boccaccio) ၊ ဒန်တေ အယ်လီဂ(ယ)ရီ (Dante) တို့ကို ဩဇာညောင်းစေခဲ့၏။
၁၈ ရာစုအဆုံးပိုင်း၌ 'အရင်းခံ အရိုင်းသဘာဝဖော်ကျူးမှု' (Romanticism) သည် ဂရိဒဏ္ဍာရီအပါအဝင် ဂရိမှုရေးရာနယ်ပယ်အားလုံးအတွက် စိတ်အားထက်သန်မှု အားလှိုင်းတစ်ရပ်ကို စတင်ပေါက်ဖွားစေခဲ့သည်။ ဗြိတိန်တွင်လည်း ဂရိအလွမ်းဇာတ်နှင့် ဟိုးမားကဗျာများကို စတင်ဘာသာပြန်ခြင်းများက ခေတ်ပြိုင်ကဗျာဆရာများ နှင့် ပန်းချီဆရာများကို စေ့ဆော်မှု ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ခရစ်တော့ဖ် ဂလွတ်ခ် (Christoph Gluck)၊ ရစ်ချတ် ရှထရောက်စ် (Richard Strauss)၊ ယာ့ခ် အောဖန်ဘာ့ခ် (Jacques Offenbach) တို့နှင့် အခြားများစွာသောသူများသည် ဂရိဒဏ္ဍာရီ အဓိကဇာတ်လမ်ကြီးများကို ဂီတအဖြစ် ဖန်တီး တင်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ တောမတ်စ် ဘာလ်ဖင့်ချ် (Thomas Bulfinch) နှင့် နာသန်းနီယယ်လ် ဟောသောန် (Nathaniel Hawthorne) တို့အပါအဝင် ၁၉ ရာစု အမေရိကန် စာရေးဆရာများသည် ဂန္ထဝင် ဒဏ္ဍာရီများ (ဂရိ/ရောမ) ကို လေ့လာခြင်းသည် အင်္ဂလိပ်နှင့် အမေရိကန် စာပေများကို နားလည်ရာတွင် မရှိမဖြစ် အရေးပါကြသည့် အယူအဆကို ဆွဲကိုင်ခဲ့ကြသည်။:4 မကြာသေးမီကာလများ၌ ဂန္ထဝင် အဓိကဇာတ်လမ်းကြောင်းရာများကို ပြင်သစ်မှ ရှောန် အနူယီ (Jean Anouilh) ၊ ရှောန် ကောတိုး (Jean Cocteau) ၊ ရှောန် ရှီဟိုဒူ (Jean Giraudoux) တို့နှင့် အမေရိကန်မှ ယူဂျီးန် အို'နေးလ် (Eugene O'Neill)၊ ဗြိတိန်မှ တီ အက်စ် အက်လိယတ် (Eliot) စသည့်ပြဇာတ်ဆရာများ၊ ဂျိမ်းဂျွိုက်စ် နှင့် အော်န်ဒရေး ဂျိ (André Gide) ကဲ့သို့သော ဝတ္ထုဆရာများက ပြန်လည် ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ကြပေသည်။
ယခင်က အေသင်မြို့မှ အပေါလိုဒိုးရပ်စ်ရေးသည်ဟု ယူဆခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ထိုယူဆချက်မှာ အမှားအယွင်းဖြစ်နေသောကြောင့် ရှေ့တွင် ဆူဒို - Pseudo ဟု ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
နတ်ဘုရားများဟု ဆိုရာတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးလိင် ရှိသော နတ်များအားလုံးကို ဆိုလိုသည်။
ရှင်းလင်းချက် : မေးခွန်းမေးသူက 'သေခြင်းတရား'ကို မထီလေးစားဟန်ရှိ(ခဲ့)သော ဆိုကရေးတီးသည် အရှက်ရသင့်သည် (သို့) လူဆိုးတစ်ဦးဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုရာ ပလေးတိုးက သေခြင်းကို မထီလေးစားလုပ်သူမှာ သူ့ဆရာ ဆိုကရေးတီးတစ်ဦးသာမက အာခိလိဇ်သည်လည်း ထိုသို့ပင်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောနေခြင်းဖြစ်၏။
ရှေးဟောင်းဂရိ/ရောမ နှင့်ပတ်သက်သော အရာများကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်တင်ပြသောကြောင့် ၁၄-၁၆ ရာစုများတွင် ဥရောပ အနုပညာ၊ စာပေ စသည် ပြန်လည်ဆန်းသစ်တိုးတက်လာသည့်ခေတ်
Greek Mythology။ 26 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Adkins၊ A. W. H.; Pollard၊ John R. T. (2002) ။ "Greek Mythology"။ Encyclopædia Britannica။
Guirand၊ Felix (1987) ။ "Greek Mythology"။ in Guirand၊ Felix (ed.)။ New Larousse Encyclopedia of Mythology။ Translated by R. Aldington and D. Ames။ Hamlyn။ ISBN 978-0-600-02350-0။
Adkins၊ A. W. H.; Pollard၊ John R. T. (Mar 2, 2020) ။ "Greek Religion"။ Encyclopædia Britannica။
Homeric Hymn to Aphrodite, 75–109 Archived 12 September 2006 at the Wayback Machine.
"Heracles"။ Encyclopædia Britannica။ Feb 6, 2020 ။
"Troy (Ancient City)"။ Encyclopædia Britannica။ Apr 25, 2019 ။
"Euhemerus"။ Encyclopædia Britannica။ Jan 3, 2020 ။
Barfield၊ Raymond (2011)။ The Ancient Quarrel Between Philosophy and Poetry။ Cambridge: Cambridge University Press။ pp. 75–76။ ISBN 978-1-139-49709-1။
Buxton၊ Richard G. A.; Bolle၊ Kees W.; Smith၊ Jonathan Z. (2002)။ "myth"။ Encyclopædia Britannica။
Paul၊ Adams John (10 January 2010)။ Mycenaean Divinities။ California State University။ 25 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Miles, Geoffrey, ed. (2006)။ Classical Mythology in English literature: A Critical Anthology။ Routledge။ ISBN 0415147557။ OCLC 912455670။
မူရင်းမဟုတ်သော အခြား ပညာရှင်များ၏ စာပေလက်ရာများ (Secondary sources)